ဂေဇတ်ရွာမှ ရှေ့ နေများ ထံမှ အကြံဥာဏ်များတောင်းခံခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ဂေဇတ်ရွာမှ ရှေ့ နေများ ထံမှ အကြံဥာဏ်များတောင်းခံခြင်း
ဂေဇတ်ရွာမှ ရှေ့ နေများ ထံမှ အကြံဥာဏ်များတောင်းခံခြင်း
Posted by Passing By on Jun 7, 2012 in Society & Lifestyle |2comments
၁။ ရဲစခန်း သည် တရားခံဟုသာ ယူဆနိုင်ဖွယ်ရှိ သော အရပ်သားတစ်ယာက် ကို ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခွင့်ရှိပါသလား .. ? ထိုသို့ရိုက်နှက်စစ်ဆေးလျှင် တိုင်ကြားခွင့်ရှိပါသလား.. ? ဘယ်လို ဥပဒေပုဒ်မများ နှင့် တိုင်ကြားနိုင်ပါသလဲ ?
၂။ သူခိုးတစ်ဦး သည် ဘက်ထရီ အိုးတစ်လုံးခိုးလာသည်၊ ထို ဘက်ထရီအိုးကို လူတစ်ဦးအားရောင်းချသည်။ ထိုသူက ၀ယ်လိုက်သည်။ သူခိုးကို ရဲမိသွားသည်။ သူခိုးက ဘက်ထရီအိုး ၀ယ်သူကို လက်ညှိုးထိုး သည် ထိုအခါ ထို ဘက်ထရီအိုးဝယ်သူ အမှု ရင်ဆိုင်ရသည်။ ထိုသို့ မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများ ပြုလုပ်သင့်သနည်း?
၃။ ကြားဖူးသည် . သူခိုးကိုရဲကမိသည်။ ရဲကမေးသည် ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်သူတွေဆီရောင်းသလဲ ? သူခိုးက မဖြေတတ်။ သို့နှင့် ရဲက ပြောသည် အဆင်ပြေရာ လက်ညှိုးထိုးလိုက်ပါ မင်း အတွက် ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ် .. တဲ့ .. ။ လက်ညှိုးထိုးခံရသောသူ ကအလိုအလျောက် အမှုပတ်သည် ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်ပါသလဲ ?
(သူကြီး .. စာကြောင်တွေက တအားတိုနေပါတယ် ..သို့သော် ခွင့်ပြုနော် .. ပွိုင့်လည်းမပေးပါနဲ့ တင်ခွင့်သာပေးပါနော် .. သူကြီးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည် )
ရှေ့နေတယောက်ယောက်ကိုမေးရင် ပိုကောင်းမယ်။ ရွာထဲမှာ ရှေ့နေမရှိဘူး၊ တရား သဂျီး ပဲရှိတယ်။
ဟုတ်လား . ကျေးဇူးပါဗျာ .. ! ! !